कसरी गर्ने लक्ष्मीको पूजा ? - NewsCenterNepal.com
कसरी गर्ने लक्ष्मीको पूजा ?
काठमाडौ- तिहारको तेस्रो दिन आज साँझ धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ ।
सफासुग्घर र लिपपोत नगरिएको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने मान्यताका आधारमा आज बिहानैदेखि घरआँगन सफासुग्घर र लिपपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई आफ्नो घरमा आमन्त्रण गर्ने गरिन्छ । आज विशेषगरी घरका झ्याल, ढोका, चोटा, कोठा, सड्घार, कौसी, अटाली र भर्याङलगायतका स्थानमा सरसफाइ गरी दीपावली गर्ने गरिन्छ ।
आजको रातलाई सुखरात्री पनि भनिन्छ । लक्ष्मी पूजाका लागि आज साँझ आँगनदेखि मूलढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरी पूजा गर्ने पूजा कोठासम्म गाईको गोबर र रातोमाटोले लिपपोत गरेर चामलको पीठो र अबीरले लक्ष्मीको पाइला बनाई लक्ष्मी आउने बाटो देखाइन्छ ।
पाइलैपिच्छे केराको सुत्लो अथवा माटाको पालामा दीप प्रज्ज्वलन गरी झिलिमिली बनाइन्छ । आजको दिनमा महालक्ष्मी तथा श्री गणेशको नयाँ मूर्ति वा तस्विर थापना गरेर विषेश पूजा गर्ने गरिन्छ र अन्त्यमा लक्ष्मीको आरती गर्ने गरिन्छ । लक्ष्मीको पूजा गर्ने र आरती गर्ने विधी पनि शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । लक्ष्मीको पूजा तथा आरती गर्दा शास्त्रमा जनाइअनुसार गर्न सके लक्ष्मीको कृपा सहजै हुने विश्वास गरिन्छ ।
घरमा कुकुर पाल्नाले यस्तो हुन्छ फाइदा